” Wisdom ရဲ့ အရေးကွီးပုံ ” နဲ့ ” Education ရဲ့ အရေးပါ ပုံ ” – Nyi Ma Lay
” Wisdom ရဲ့ အရေးကွီးပုံ ” နဲ့ ” Education ရဲ့ အရေးပါ ပုံ ”
မွနျမာ စာလုံးတှငျ ပညာ ဟု တဈလုံး တညျး သုံးသျောလညျး အင်ျဂလိပျ ဘာသာတှ ငျမူ Education နှငျ့ Wisdom ဟူ၍ နှဈမြိုးကှဲလသေညျ
Education ဆိုတာက ကြောငျးကနသေျော လညျးကောငျး မိဘ ဆီကနသေျော လညျကောငျး သငျယူတကျမွောကျ ဘှဲ့ရလာတာကို ဆိုလိုတာပါ အဲ့တာကို ပညာတကျ educated person လို့ချေါပါတယျ
နောကျပညာတဈခုက အမှားအမှနျကိုကောငျးကောငျး ဝဖေနျ ပိုငျးခွားနိုငျတဲ့ပညာပါ
ဘယျလို မနေ သငျ့ဘူး ဘယျလိုနသေငျ့တယျ
ဘယျလိုမယူဆ သငျ့ဘူး ဘယျလို ယူဆသငျ့တယျ စသညျ့ အမှားအမှနျဝဖေနျနိုငျတာ ကိုတော့ Wisdom ဆိုတဲ့ စာလုံးသုံးပါတယျ Wise ဆိုတဲ့စာလုံးက လာတာပါ
လှနျခဲ့တဲ့ ၁၂ နှဈလောကျက ကြှနျတျော စကိုငျးနကျမီဒီယာ မှာ ဘာသာပွနျလုပျတာ ၁ သိနျးရပါတယျလခ ကြှနျတော့အတှကျ ဖူလုံ ပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ဆကျတကျခငျြတဲ့ ဗွိတိ ကောငျစယျက ၈ ပတျ ကို ၃ သိနျးသှငျးရမယျ
IELTS ဖွရေငျလညျး ၁၄၅ ဒျေါလာ သှငျးရမယျဆိုတော့ ကြှနိတော့ လကျထဲမှာက ၁၀ သိနျးလောကျပဲရှိတယျ မလုံလောကျပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ စကိုငျးနကျ ကနေ အလုပျထှကိ လိုကျပွီး မထသ ၆၂ လိုငျးက ၅ခ /၆၈၀၃ကို isuzu ကားကွီး ကို တဈလ ၆ သိနျးနဲ့ ကနျထရိုကျယူလိုကျပါတယျ
နလေ့ညျဘကျမှာ ယဉျမောငျးနဲ့စပယျယာက လိုငျးဆှဲခိုငျးပါတယျ ကြှနျတျောက တော့ သငျတနျးတှေ လိုကျတကျပါတယျ ညနေ ပွနျလာတော့ တောငျဒဂုံက SGI ဆိုတဲ့အထညျခြူပျ ဖယျရီ ယူ ထားပါတယျ
တောငျဒဂုံ စကျမူ့ဇုနျကနေ ရလေညျ ကြောကျတနျးဘုရား ရှထေိ့ပါ ကြှနျတျော ကိုယျတိုငျမောငျးပါတယျ ကြောကျတနျးရေ လညျ ဘုရားရှမှေ့ာ ည အိပျပါတယျ မနကျကရြငျ အလုပျသမားတှေ ပွနျကွိုပွီး စကျရုံပို့ပျေါ့ တဈနေ့ ၄ သောငျး ရပါတယျ
” Wisdom ရဲ့ အရေးကွီးပုံ”
ကြှနျတော့တို့ကား ဂိတျက တောငျဒဂုံ မွို့စှနျမှာ ဂိတျဆုံးတယျ ကားဂိတျမှာ ရခေဲရေ ရောငျးနတေဲ့ ” အငယျလေး ” ဆိုတဲ့ လူငယျ တဈယောကျရှိတယျ အတနျးပညာ ၂ တနျးလောကျတကျဖူးတယျ
ညနေ မှာ ပွနျခါနီး သူက ပိုနတေဲ့ ရေ ခဲရေ ကိုလိုငျးဆှဲပွီး ပွနျလာတဲ့ကားသမားတှေ လိုကျလိုကျတိုကျတယျ ညနဘေကျ သူအလုပျအားရငျ ဂိတျမှာ ပွငျနတေဲ့ကားတှလေိုကျ ကူညီတယျ စကားပွော အလှနျညကျပွီး လူကွီးတှနေဲ့လညျးအဆငျပွအေောငျပေါငျးသငျးတကျလို့ လူ ခဈြခံရတယျ
ကြှနျတျောက ကိုယျ့ကား ကို ကိုယျတိုငျပွငျတော့ သူက လာလာကူရငျးနဲ့ ရငျးနှီးလာတယျသူနတေို့ငျ လာလာပွငျပေးတယျကြှနျတျောလညျး ကားပွငျရငျးသငျပေးတယျပွီးရငျ CNG gas သှားထညျ့ရငျ သူလိုကျလာတယျ
ကြှနျတျော ကားမောငျး ဆကျသငျပေးတယျ ကားကွီးတှရေဲ့စီယာတိုငျ ယူဆ ပုံ ကို သူကြှမျးကငျြလာတော့ကားတဈစီးပွီးတဈစီး gas ထညျ့ရငျ သူကားရှပေ့ေးတယျကြှနျတျောက ကားပျေါမီးဖှငျ့ပွီး အင်ျဂလိပျ စာအုပျဖတျနတောပေါ့
လိုရငျးပွော ရရငျ သူ ကားကွီး မောငျးနိုငျသှားတယျနောကျတော့ ကြှနျတျောကို စပယျယာ လိုငျစငျ လုပျပေးဖို့ပူဆာ တယျကြှနျတျောက ကားလောက မှ ခဏ ပဲ နမှော ဒါကွောငျ့မို့ ကူညီ နိုငျသလောကျ ကူညီမယျ စိတျကူးထားတော့
ဘယျသူကပဲ လိုငျစငျလုပျပေးပါ ကားမောငျးသငျပေးပါလာပွောရငျ ကှနျတျောအဆငိပွအေောငျလုပျပေးတာခညျြးပဲနောကျတော့ အငယျလေး စပယျယာ လိုကျတယျ တခွားကားမှာ ကားပိုငျရှငျရဲ့ ယုံကွညျမှူ့ ရသှားတော့Owner casher ဖွဈလာတယျ ငှသေိမျးပေါ့
အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ ကြှနျတျော IELTS စာမေးပှဲမှာ6.7 ရသှားတော့ ကားလောက ကနေ ကြှနျတျော ထှကျသှားတယျ၃၅ လမျးမှာ Global link နာမညျနဲ့ အင်ျဂလိပျစကားပွော သငျတနျးဖှငျ့လိုကျပါတယျ
ဒီနေ့ အခြိနျ ထိ အဲကှနျးအောကျမှာ ဘာသာပွနျရတဲ့ဘဝကားသမားဘဝ နဲ့ အင်ျဂလိပျစာဆရာ ဘဝ ဘယျဟာ သဘောကလြဲမေးရငျကားသမားဘဝ ကို ကြှနျတျောပြျောတယျေ ယာင်ျကြားဆနျဆနျ ရုံးကနျ ရတာကို ကြှနျတျောနှဈသကျပါတယျ
၂၀၁၆ မှာ YBS မပွောငျး ခငျလေးမှာ ကြှနျတျော မွို့တျောခနျးမ ရှမှေ့ာ ဗီယကျနာမျ တဈယောကျကို မွို့တျောခနျးမ အကွောငျးရှငျးပွနတေုနျး လိုငျးကားတဈစီး ကြှနျတော့ ဘေးမှာ လာရပျ ပွီး
” ကိုကြျော ကြှနျတော့ မှတျမိလား ” ကြှနျတျော အငယျလေး ပါ” ဂိတျဘကျရောကျရငျ ဝငျ လာ ခဲ့ပါဦးဗြာ ကြေးဇူးဆပျ ခငျြလို့ ကြှနျတျော အခု ကားပိုငျ ဖွဈနပွေီဗြ”
ကြှနျတျော ပွုံး မိ တယျ တဈခြိနျက ကားဂိတျမှာ ရခေဲရေ ရောငျးနတေဲ့ခလေး အခု လိုငျးကားတဈစီး ပိုငျသှားတယျ သူ့မှာ education မရှိခဲ့ဘူး ဒါပမေယျ့ Wisdom တော့ရှိတယျ
ဘဝ မှာ ဘယျလိုနသေငျ့တယျ ဘယျလိုမနသေငျ့ဘူး ဘယျသူကို ခဉျြးကပျသငျ့တယျ ဘယျသူ့ကိုရှောငျသငျ့တယျ ဘယျလိုစကားမပွော သငျ့ဘူး ဘယျလို ပွောသငျ့တယျ အမှား အမှနျကို ကောငျးကောငျး ခှဲနိုငျခဲ့တယျ
သူက ဘဝ ကို Education မရှိပမေယျ Wisdom နဲ့ ဘဝ ကို ဖွတျသနျးသှားတယျ
” Education ” ရဲ့ အရေးပါ ပုံ
Education ကလညျး အရမျးအရေးပါ ပါတယျ တဈခြို့ ရဟနျးပညာရှိ လူပညာရှိတှကေ ကြောငျးပညာရေး ကို ” သငျညာ ” တှေ ဆို ပွီး wisdom လောကျ အရေးမပါ ဘူး လို့ ဆိုတာလညျး မကွာခဏ ဖတျရ ပါတယျ
ကြှနိတျော ယဉျကြေးစှာ ငွငျးဆိုပါတယျ Wisdom လိုပဲ Education ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ ဆရာတဈယောကျက ပညာဆိုတာ ” ကြောငျးကသငျလာတာမဟုတျဘူး ဆယျတနျး အောငျဖို့ထကျ လူ လိုနားလညျ ဖို့ လိုတယျ လို့ ဆိုတယျ ”
သူပွော ခငျြတာက. လူ့ဘဝ နတေကျ ဖို့ ကို အပွုသဘောဆို ခငျြတာ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ စကားကို ဆယျတနျး တဖုတျဖုတျ ကနြတေဲ့ကောငျက ယူ သုံးရော ” ဆယျတနျးအောငျ ဖို့ ထကျ လူလိုသိဖို့ လိုတယျတဲ့ ”
အမှနျက မိဘ ကြောငျးထားပါ လြှကျ ဆယျတနျးတောငျ အဖွဈရှိအောငျမဖွေ နိုငျတဲ့ ကောငျက ယူသုံး လိုကျပွီး သူ့ရဲ့ ဆယျတနျးမအောငျတာကို ကာဘာလုပျသှားတယျ
ကြှနျတျော ကားသမား ဘဝ မှာယုဇန ဥယဉျမွို့တျောက ညီညီအောငျ ဆိုတဲ့ စကျဆရာသိပျတျောတယျမကျြစိကို အဝတျစညျးထားပွီး ကားအငျဂငျြက ဘယျမူလီမဆို ဖွုတျယူလာခဲ့ သူလကျနဲ့ စမျးကွညျ့တာနဲ့တငျ ဘယျနရောက မူလီ ဆိုတာ အလှတျပွောနိုငျအောငျ
သူ့Subject ကို သူနိုငျ နငျးတယျ အပွောအဆိုလညျး ညကျတယျကြှနျတျော ရဲ့ မကျကနီကယျ အငျဂငျြနီယာ တကျနတေဲ့သူငယျခငျြး အမွဲတမျး ကြောငျးပွေးပွီး ထနျးရညျသောကျတယျအခြိနျတနျဘှဲ့ရ လာတယျ education certificate ရှိတယျ
စကျနဲ့ ပတျသတျတဲ့အငျဂငျြနီယာပမေယျ့ကားရဲ့ ပငျစတငျ တောငျ အပွငျမှာ မတှေ့ ဘူးဖူးအဲ့တာ သူရယျ စကျဆရာ ညီညီအောငျရယျ သဘောင်ျတကျတော့ စကျကို အရမျးကြှမျးတဲ့ ညီညီ အောငျက ဆီလောငျးအဆငျ့နဲ့သငေ်ျဘာ လိုကျရတယျ လခ ၇ သိနျး
စကျအကွောငျးတကယျနားမလညျတဲ့ အငျဂငျြနီယာကြောငျးဆငျးက တတိယ အရာရှိ ဖွဈသှားတယျ လခ သိနျး၂၀ဘာကှာသှားလဲEducation ကှာသှားတာပဲ
ဒါကွောငျ့ Education ကလညျး ဘဝ ရပျတညျရေးအတှကိသူ့နရောနဲ့ သူ အသုံးဝငျပါတယျသငျညာ ပဲ ပွောပွောဘာပဲပွောပွော ပွောခငျြတာပွော အသုံးဝငျတယျ
တဈခြို့ အရာ ရှိတှေ သိပျမောကျမာ ရိုငျးစိုငျးတယျလူကွီးကို လညျး ဆဲ ခငျြဆဲတယျ Wisdomမရှိဘူးပေါ့ဒါပမေယျ့ Education က ရှိနတေော့ ဘဝ ရပျတညျလို့ရနတေယျ
တဈခြို့လညျး Education မရှိပမေယျ့နတေကျ ထိုငျတကျ တော့ တဖွညျးဖွညျး အထကျရောကျလာတယျ အဲ့တာ ဘဝ ကို Wisdom နဲ့ရပျတညျတာပေါ့ဘဝ မှာ Education သို့မဟုတျ Wisdom တစ်ခုကောငျးကောငျးရှိရငျ ဘဝ ရပျတညျလို့ရတယျ
နှဈခု လုံး ရှိရငျ Perfect ဖွဈသှားပါတယျဒါကွောငျ့ ကိုယျ့မှာ လိုနတော ကိုယျ့ ကွိုးစားဖွညျ့ပေါ့အလားတူပဲEducation ကသာ ကောငျးတယျWisdom ကသာ မှနျတယျ လို့ ဇောငျးပေးပွီ မပွောအပျပါဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နှဈခု စလုံး လိုအပျ လို့ပေါ့
ဗာဟု သစ်စဉ်စ သိပ်ပဉ်စ ဝိနယောစ သုသိက်ခိတောသုဘာသိတာစ ယာဝါစာ ဧတံမင်ျဂလ မုတ်တမံ အကွားအမွငျဗဟုသုတ မြားခွငျး အပွဈကငျးသော စကျမူ့လကျမူ့အတတျကို တတျခွငျး ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးခွငျး အပွောအဆို ခြိုသာခွငျး ယဉျကြေးခွငျး ဤလေးပါးသညျ တိုးတကျကွီးပှားခမျြးသာကွောငျး ကောငျးမွတျသော မင်ျဂလာမညျပေ၏
Credit Ko Kyaw Min Tun
အလှနျကောငျးတဲ့ တှေးချေါယူဆခကျြပါ။ ဒီစာစုလေး ကို လှနျခဲ့တဲ တနှဈကြျောကဖတျဖူးခဲ့ပမေဲ့ ပွနျရှာလို့ မတှဖွေ့ဈနတောခဲ့တာနဲ့ ဒီနေ့ တိုကျဆိုငျစှာ ပွနျတှတေ့ော့ မဖတျဖွဈခဲ့သူတှေ ဖတျရဖို့ ထပျရှယျပါတယျ ဖတျကွညျ့ပါ။ မူရငျးစာရေး သူ ကိုကြျောမငျးထှနျးကိုအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။
မြန်မာ စာလုံးတွင် ပညာ ဟု တစ်လုံး တည်း သုံးသော်လည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာတွ င်မူ Education နှင့် Wisdom ဟူ၍ နှစ်မျိုးကွဲလေသည်
Education ဆိုတာက ကျောင်းကနေသော် လည်းကောင်း မိဘ ဆီကနေသော် လည်ကောင်း သင်ယူတက်မြောက် ဘွဲ့ရလာတာကို ဆိုလိုတာပါ အဲ့တာကို ပညာတက် educated person လို့ခေါ်ပါတယ်
နောက်ပညာတစ်ခုက အမှားအမှန်ကိုကောင်းကောင်း ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပညာပါ
ဘယ်လို မနေ သင့်ဘူး ဘယ်လိုနေသင့်တယ်
ဘယ်လိုမယူဆ သင့်ဘူး ဘယ်လို ယူဆသင့်တယ် စသည့် အမှားအမှန်ဝေဖန်နိုင်တာ ကိုတော့ Wisdom ဆိုတဲ့ စာလုံးသုံးပါတယ် Wise ဆိုတဲ့စာလုံးက လာတာပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် စကိုင်းနက်မီဒီယာ မှာ ဘာသာပြန်လုပ်တာ ၁ သိန်းရပါတယ်လခ ကျွှန်တော့အတွက် ဖူလုံ ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွှန်တော် ဆက်တက်ချင်တဲ့ ဗြိတိ ကောင်စယ်က ၈ ပတ် ကို ၃ သိန်းသွင်းရမယ်
IELTS ဖြေရင်လည်း ၁၄၅ ဒေါ်လာ သွင်းရမယ်ဆိုတော့ ကျွှနိတော့ လက်ထဲမှာက ၁၀ သိန်းလောက်ပဲရှိတယ် မလုံလောက်ပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ စကိုင်းနက် ကနေ အလုပ်ထွကိ လိုက်ပြီး မထသ ၆၂ လိုင်းက ၅ခ /၆၈၀၃ကို isuzu ကားကြီး ကို တစ်လ ၆ သိန်းနဲ့ ကန်ထရိုက်ယူလိုက်ပါတယ်
နေ့လည်ဘက်မှာ ယဉ်မောင်းနဲ့စပယ်ယာက လိုင်းဆွဲခိုင်းပါတယ် ကျွှန်တော်က တော့ သင်တန်းတွေ လိုက်တက်ပါတယ် ညနေ ပြန်လာတော့ တောင်ဒဂုံက SGI ဆိုတဲ့အထည်ချူပ် ဖယ်ရီ ယူ ထားပါတယ်
တောင်ဒဂုံ စက်မူ့ဇုန်ကနေ ရေလည် ကျောက်တန်းဘုရား ရှေ့ထိပါ ကျွှန်တော် ကိုယ်တိုင်မောင်းပါတယ် ကျောက်တန်းရေ လည် ဘုရားရှေ့မှာ ည အိပ်ပါတယ် မနက်ကျရင် အလုပ်သမားတွေ ပြန်ကြိုပြီး စက်ရုံပို့ပေါ့် တစ်နေ့ ၄ သောင်း ရပါတယ်
” Wisdom ရဲ့ အရေးကြီးပုံ”
ကျွှန်တော့တို့ကား ဂိတ်က တောင်ဒဂုံ မြို့စွန်မှာ ဂိတ်ဆုံးတယ် ကားဂိတ်မှာ ရေခဲရေ ရောင်းနေတဲ့ ” အငယ်လေး ” ဆိုတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ရှိတယ် အတန်းပညာ ၂ တန်းလောက်တက်ဖူးတယ်
ညနေ မှာ ပြန်ခါနီး သူက ပိုနေတဲ့ ရေ ခဲရေ ကိုလိုင်းဆွဲပြီး ပြန်လာတဲ့ကားသမားတွေ လိုက်လိုက်တိုက်တယ် ညနေဘက် သူအလုပ်အားရင် ဂိတ်မှာ ပြင်နေတဲ့ကားတွေလိုက် ကူညီတယ် စကားပြော အလွန်ညက်ပြီး လူကြီးတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းတက်လို့ လူ ချစ်ခံရတယ်
ကျွှန်တော်က ကိုယ့်ကား ကို ကိုယ်တိုင်ပြင်တော့ သူက လာလာကူရင်းနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်သူနေ့တိုင် လာလာပြင်ပေးတယ်ကျွှန်တော်လည်း ကားပြင်ရင်းသင်ပေးတယ်ပြီးရင် CNG gas သွားထည့်ရင် သူလိုက်လာတယ်
ကျွှန်တော် ကားမောင်း ဆက်သင်ပေးတယ် ကားကြီးတွေရဲ့စီယာတိုင် ယူဆ ပုံ ကို သူကျွှမ်းကျင်လာတော့ကားတစ်စီးပြီးတစ်စီး gas ထည့်ရင် သူကားရွှေ့ပေးတယ်ကျွှန်တော်က ကားပေါ်မီးဖွင့်ပြီး အင်္ဂလိပ် စာအုပ်ဖတ်နေတာပေါ့
လိုရင်းပြော ရရင် သူ ကားကြီး မောင်းနိုင်သွားတယ်နောက်တော့ ကျွှန်တော်ကို စပယ်ယာ လိုင်စင် လုပ်ပေးဖို့ပူဆာ တယ်ကျွှန်တော်က ကားလောက မှ ခဏ ပဲ နေမှာ ဒါကြောင့်မို့ ကူညီ နိုင်သလောက် ကူညီမယ် စိတ်ကူးထားတော့
ဘယ်သူကပဲ လိုင်စင်လုပ်ပေးပါ ကားမောင်းသင်ပေးပါလာပြောရင် ကွှန်တော်အဆငိပြေအောင်လုပ်ပေးတာချည်းပဲနောက်တော့ အငယ်လေး စပယ်ယာ လိုက်တယ် တခြားကားမှာ ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ ယုံကြည်မှူ့ ရသွားတော့Owner casher ဖြစ်လာတယ် ငွေသိမ်းပေါ့
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကျွှန်တော် IELTS စာမေးပွဲမှာ6.7 ရသွားတော့ ကားလောက ကနေ ကျွှန်တော် ထွက်သွားတယ်၃၅ လမ်းမှာ Global link နာမည်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ အချိန် ထိ အဲကွန်းအောက်မှာ ဘာသာပြန်ရတဲ့ဘဝကားသမားဘဝ နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ ဘဝ ဘယ်ဟာ သဘောကျလဲမေးရင်ကားသမားဘဝ ကို ကျွှန်တော်ပျော်တယ်ေ ယာင်္ကျားဆန်ဆန် ရုံးကန် ရတာကို ကျွှန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်
၂၀၁၆ မှာ YBS မပြောင်း ခင်လေးမှာ ကျွှန်တော် မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ ဗီယက်နာမ် တစ်ယောက်ကို မြို့တော်ခန်းမ အကြောင်းရှင်းပြနေတုန်း လိုင်းကားတစ်စီး ကျွှန်တော့ ဘေးမှာ လာရပ် ပြီး
” ကိုကျော် ကျွှန်တော့ မှတ်မိလား ” ကျွှန်တော် အငယ်လေး ပါ” ဂိတ်ဘက်ရောက်ရင် ဝင် လာ ခဲ့ပါဦးဗျာ ကျေးဇူးဆပ် ချင်လို့ ကျွှန်တော် အခု ကားပိုင် ဖြစ်နေပြီဗျ”
ကျွှန်တော် ပြုံး မိ တယ် တစ်ချိန်က ကားဂိတ်မှာ ရေခဲရေ ရောင်းနေတဲ့ခလေး အခု လိုင်းကားတစ်စီး ပိုင်သွားတယ် သူ့မှာ education မရှိခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့် Wisdom တော့ရှိတယ်
ဘဝ မှာ ဘယ်လိုနေသင့်တယ် ဘယ်လိုမနေသင့်ဘူး ဘယ်သူကို ချဉ်းကပ်သင့်တယ် ဘယ်သူ့ကိုရှောင်သင့်တယ် ဘယ်လိုစကားမပြော သင့်ဘူး ဘယ်လို ပြောသင့်တယ် အမှား အမှန်ကို ကောင်းကောင်း ခွဲနိုင်ခဲ့တယ်
သူက ဘဝ ကို Education မရှိပေမယ် Wisdom နဲ့ ဘဝ ကို ဖြတ်သန်းသွားတယ်
” Education ” ရဲ့ အရေးပါ ပုံ
Education ကလည်း အရမ်းအရေးပါ ပါတယ် တစ်ချို့ ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေက ကျောင်းပညာရေး ကို ” သင်ညာ ” တွေ ဆို ပြီး wisdom လောက် အရေးမပါ ဘူး လို့ ဆိုတာလည်း မကြာခဏ ဖတ်ရ ပါတယ်
ကျွှနိတော် ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းဆိုပါတယ် Wisdom လိုပဲ Education ကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ဆရာတစ်ယောက်က ပညာဆိုတာ ” ကျောင်းကသင်လာတာမဟုတ်ဘူး ဆယ်တန်း အောင်ဖို့ထက် လူ လိုနားလည် ဖို့ လိုတယ် လို့ ဆိုတယ် ”
သူပြော ချင်တာက. လူ့ဘဝ နေတက် ဖို့ ကို အပြုသဘောဆို ချင်တာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ စကားကို ဆယ်တန်း တဖုတ်ဖုတ် ကျနေတဲ့ကောင်က ယူ သုံးရော ” ဆယ်တန်းအောင် ဖို့ ထက် လူလိုသိဖို့ လိုတယ်တဲ့ ”
အမှန်က မိဘ ကျောင်းထားပါ လျှက် ဆယ်တန်းတောင် အဖြစ်ရှိအောင်မဖြေ နိုင်တဲ့ ကောင်က ယူသုံး လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆယ်တန်းမအောင်တာကို ကာဘာလုပ်သွားတယ်
ကျွှန်တော် ကားသမား ဘဝ မှာယုဇန ဥယဉ်မြို့တော်က ညီညီအောင် ဆိုတဲ့ စက်ဆရာသိပ်တော်တယ်မျက်စိကို အဝတ်စည်းထားပြီး ကားအင်ဂျင်က ဘယ်မူလီမဆို ဖြုတ်ယူလာခဲ့ သူလက်နဲ့ စမ်းကြည့်တာနဲ့တင် ဘယ်နေရာက မူလီ ဆိုတာ အလွှတ်ပြောနိုင်အောင်
သူ့Subject ကို သူနိုင် နင်းတယ် အပြောအဆိုလည်း ညက်တယ်ကျွှန်တော် ရဲ့ မက်ကနီကယ် အင်ဂျင်နီယာ တက်နေတဲ့သူငယ်ချင်း အမြဲတမ်း ကျောင်းပြေးပြီး ထန်းရည်သောက်တယ်အချိန်တန်ဘွဲ့ရ လာတယ် education certificate ရှိတယ်
စက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပေမယ့်ကားရဲ့ ပင်စတင် တောင် အပြင်မှာ မတွေ့ ဘူးဖူးအဲ့တာ သူရယ် စက်ဆရာ ညီညီအောင်ရယ် သဘောင်္တက်တော့ စက်ကို အရမ်းကျွှမ်းတဲ့ ညီညီ အောင်က ဆီလောင်းအဆင့်နဲ့သင်္ဘော လိုက်ရတယ် လခ ၇ သိန်း
စက်အကြောင်းတကယ်နားမလည်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းက တတိယ အရာရှိ ဖြစ်သွားတယ် လခ သိန်း၂၀ဘာကွာသွားလဲEducation ကွာသွားတာပဲ
ဒါကြောင့် Education ကလည်း ဘဝ ရပ်တည်ရေးအတွကိသူ့နေရာနဲ့ သူ အသုံးဝင်ပါတယ်သင်ညာ ပဲ ပြောပြောဘာပဲပြောပြော ပြောချင်တာပြော အသုံးဝင်တယ်
တစ်ချို့ အရာ ရှိတွေ သိပ်မောက်မာ ရိုင်းစိုင်းတယ်လူကြီးကို လည်း ဆဲ ချင်ဆဲတယ် Wisdomမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမယ့် Education က ရှိနေတော့ ဘဝ ရပ်တည်လို့ရနေတယ်
တစ်ချို့လည်း Education မရှိပေမယ့်နေတက် ထိုင်တက် တော့ တဖြည်းဖြည်း အထက်ရောက်လာတယ် အဲ့တာ ဘဝ ကို Wisdom နဲ့ရပ်တည်တာပေါ့ဘဝ မှာ Education သို့မဟုတ် Wisdom တစ္ခုကောင်းကောင်းရှိရင် ဘဝ ရပ်တည်လို့ရတယ်
နှစ်ခု လုံး ရှိရင် Perfect ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ လိုနေတာ ကိုယ့် ကြိုးစားဖြည့်ပေါ့ အလားတူပဲ Education ကသာ ကောင်းတယ် Wisdom ကသာ မှန်တယ် လို့ ဇောင်းပေးပြီ မပြောအပ်ပါဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နှစ်ခု စလုံး လိုအပ် လို့ပေါ့
ဗာဟု သစ္စဉ္စ သိပ္ပဉ္စ ဝိနယောစ သုသိက္ခိတောသုဘာသိတာစ ယာဝါစာ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ အကြားအမြင်ဗဟုသုတ များခြင်း အပြစ်ကင်းသော စက်မူ့လက်မူ့အတတ်ကို တတ်ခြင်း ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းခြင်း အပြောအဆို ချိုသာခြင်း ယဉ်ကျေးခြင်း ဤလေးပါးသည် တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်း ကောင်းမြတ်သော မင်္ဂလာမည်ပေ၏
အလွန်ကောင်းတဲ့ တွေးခေါ်ယူဆချက်ပါ။ ဒီစာစုလေး ကို လွန်ခဲ့တဲ တနှစ်ကျော်ကဖတ်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ရှာလို့ မတွေ့ဖြစ်နေတာခဲ့တာနဲ့ ဒီနေ့ တိုက်ဆိုင်စွာ ပြန်တွေ့တော့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့သူတွေ ဖတ်ရဖို့ ထပ်ရှယ်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်ပါ။ မူရင်းစာရေး သူ ကိုကျော်မင်းထွန်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Previous post ဓာတုပစ်စညျး၊ ဓာတျမွသွေဇာ မပါဘဲနဲ့ သငေ်ျဘာသီးကို အသားထူထူ၊ အစနေ့ညျးနညျး၊ ပွှတျခဲနအေောငျ သီးစမေညျ့ နညျးလမျးမြား
Next post ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာထည်.မိရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ?